Inona no atao hoe syphilis, ahoana ny fampitana azy? Syphilis - soritr'aretina, famantarana, fitsaboana
Hatsarana sy fahasalamana Fanaraha-maso ny vehivavy
Inona no atao hoe syphilis, ahoana ny fampitana azy sy maneho azy?
Ny aretina isan-karazany dia voalohany amin'ny fihanaky ny aretina. Ireo aretina ireo dia mihatra indrindra amin'ny ampahany ny fananahana ny vahoaka. Na izany aza, tsy mitovy ny aretina rehetra. Ny atao hoe syphilis, maro amin'ireo marary no hahita raha tsy mifanatrika.
Inona no atao hoe syphilis ary ahoana no fampitana azy?
Ny aretina syphilis dia manondro ireo aretina mampihorohoro ara-pahasalamana amin'ny toetra mitaiza. Ny pathology dia misy fiantraikany amin'ny ati-doha - vokatry ny aretin'andoha. Rehefa misy fiantraikany eo amin'ny hoditra, ny membres membres, ny taova anatiny, ny rafi-pitabatabana ary ny rafi-pitondran-tsolika, ny fiovan'ny aretina. Ny aretina dia miavaka amin'ny làlana maharitra amin'ny vanim-potoana mampihorohoro sy famotsoran-keloka.
Ny fomba lehibe indrindra handefasana ny aretina dia ny firaisana ara-nofo. Ny aretina mihoatra ny 90% amin'ny marary dia miseho amin'ny firaisana tsy misy fiarovana. Amin'ity tranga ity, ny marary sasany dia mianatra momba ny aretina raha tsy aorian'ny fotoana - ny aretina dia misy fotoana fanararaotana . Ny faharetany dia vokatry ny toetry ny rafi-pandaminana, ny fisian'ny aretina hafa mifindra amin'ny aretina ary manimba ny vatana.
Syphilis dia mpanelanelana
Mba hahalalanao ny atao hoe syphilis dia mila mandinika ny anton'ny aretina ianao. Ny mpitsabo mpanasitrana ny aretina dia ny hoe treponema. Ity mikrôgôma ity dia manondro ny spirochetes. Ao anatin'ny vatan'olombelona, ​​dia afaka maharitra ela izy io. Amin'ny fampitomboana, mampitombo ny fifantohan-tsain'ny psy dia hita sy ny toetran'ny toetrandro. Ny taolam-paty dia misy fiantraikany eo amin'ny taova anatiny, ny fielezan'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia manomboka amin'ny mitefon'ny moka. Miaraka amin'ny fisian'ny aretin'andriam-pahasalamana dia mihatra amin'ny rivotra, ny fandroahana, ny rafitra fanamafisana ny vatana.
Pale treponema dia tsy milefitra amin'ny fandoahana rano, avo lenta. Vetivety dia maty izy ireo. Na izany aza, ny mikraoba dia manohitra ny hafanana ambany sy ny mangatsiaka. Hita fa nanao fampisehoana nandritra ny herintaona i treponema taorian'ny fery sy ny fitehirizana azy nandritra ny 780 degre. Rehefa miditra ao amin'ny vatana dia tsy mametraka fitarafana azo tsapain-tanana ny paty. Izany dia manazava ny mety hisian'ny aretina miverimberina amin'ny treponema, ny fiverimberenan'ny syphilis.
Ahoana ny fampitana ny syphilis?
Araka ny nomarihina etsy ambony, dia ampitaina amin'ny firaisana ara-nofo ny syphilis. Mandritra ny fifandraisana tsy misy fiarovana, dia mipoitra ao amin'ny sokatra ara-pahasalaman'ny salama ny aretina azo avy amin'ny molekiola. Ny fampiasana fimailo ho fanafody dia mampihena ny mety hisian'ny aretina, nefa tsy manilika izany. Misy fomba hafa handefasana io aretina io, anisan'izany ny:
fampidiran-dra - fampidirana ny rà mandriaka ho an'ny marary salama;
lalana avo lenta - avy amin'ny reny mitondra aretina amin'ny zaza mandritra ny fiterahana;
amin'ny alalan'ny fahadiovana manokana (mahalana);
amin'ny alalan'ny zavatra ao an-tokantrano (mahalana indrindra).
Rehefa nisy ny aretin'ny sifilis, dia sarotra ny mamaly ny ankamaroan'ny marary. Izany dia noho ny fisian'ny vanim-bolana. Rehefa tafiditra ao amin'ny vatana ny treponema mandritra ny fotoana maharitra dia mety tsy hahalala momba ny tenanao. Araka ny fandinihana ireo mpino mpino, io fotoana io dia afaka maharitra 2-4 herinandro. Amin'izao fotoana izao, dia miparitaka amin'ny alalan'ny vatana ny aretina amin'ny alàlan'ny rafi-pandaminana sy ny lymphatiques.
Amin'ny fiafaran'ny vanim-potoana, dia sarotra sy tsy misy fanaintainana ny endriky ny vatana eo amin'ny toeran'ny fampidiran-dra, ny fery mangirifiry - ny fisehoana voalohany amin'ny syphilis. Hatramin'io fotoana io, ny vanim-potoan'ny sifilis voalohany dia manomboka. Rehefa afaka 10 andro, dia miteraka adin-tsolika akaiky indrindra amin'ny torapasika akaiky indrindra amin'ny fery, araka ny voalaza etsy ambony. Vokatr'izany dia mihalasa ny dindon-pahavoazana, ary eo amin'ny vatan'ny marary dia misy fanaintainana avy amin'ny fery ao amin'ny tadin'ny lymph. Ny kanseran'ny fery (fery), ny fantsom-pandehan'ny lympha, ny lympha avy amin'ny sambo lymph dia maharitra 6-7 herinandro (faharetan'ny vanim-potoana voalohany).
Ny vanim-potoan'ny syphilis dia miavaka amin'ny sarin'ny klinika. Noho izany, ny endrika mampiavaka ny endrika faharoa dia ny fisehoan'ny akofilitika . Maty ny ratra mafy rehefa afaka herinandro 1-2 manomboka amin'ny fotoana fisehoany. Ny toetra mampiavaka ny fifandonana dia ny fihazakazahana manerana ny vatana. Amin'ity tranga ity dia mety ho hafa ny endriky ny singan-dehilahy: spots, abscesses, nodules.
Ireo singa ireo dia tsy manjavona na dia eo aza ny hetsik'ireo fanafody manohitra ny atidoha (fanafody, menaka). Ny fe-potoan'ny fifandonana miaraka amin'ny sifilis dia maharitra hatramin'ny roa volana. Indraindray dia mety hanjavona ilay akofa, kanefa dia hiverina indray. Manamarika ny faharetan'ny sifilis, ny dokotera dia mandinika ny fotoana maharitra. Mety haharitra 2-4 taona izany, arakaraka ny fahombiazan'ny fitsaboana.
Raha maro no mahafantatra ny atao hoe syphilis, tsy ny rehetra no naheno momba ny endrik'ity aretina ity. Io vahaolana amin'ny fampiroboroboana ny aretina syphilitika io dia miavaka amin'ny tsy fahampian'ny sarin'ny klinika. Ny sifilis momba ny firaisana ara-nofo amin'ity tranga ity dia tsy hita afa-tsy mandritra ny diagnostika amin'ny laboratoara. Ny fitsapam-pinoana ho an'ny sifilis dia mampiseho ny fisian'ny soritr'aretina. Amin'ity tranga ity dia mifototra amin'ny:
data of anamnesis;
vokatry ny fanehoan-kevitra manokana momba ny syphilis (RIBT, RPR).
Sarotra ny milaza ny siphilis amin'ny endriny mazava tsara, ny fisehoany: ny aretina dia afaka miova na tsy manome soritr'aretina mihitsy. Ankoatra izany, dia marika herinandro maromaro aorian'ny aretina ny famantarana ny syphilis. Na izany aza, maro ny marary dia tsy miraharaha loatra azy ireo. Ny ankamaroany dia mianatra momba ny fisian'ny aretina amin'ny famolavolana singa mafy, izay miseho aorian'ny fampivelarana ny endriky ny endrika voalohany.
Amin'ny fanatanterahana ny fikarohana momba ny laboratoara dia efa misy ny fiovana ao amin'ny ravina ra (fitomboan'ny leucocytes, ny famoahana ny hemoglobine). Ireo tranga ireo dia manana toetra ankapobeny, ary tsy azo atao ny mamantatra ny syphilis avy amin'izy ireo. Amin'ny faran'ny vanim-potoana voalohany, mitaraina ny marary:
fahalemena sy tsy fahampiana;
fanaintainana amin'ny hozatra sy ny tady;
Mampitombo ny hafanana amin'ny vatany hatramin'ny 38 degre.
Ny famantarana voalohany ny syphilis
Rehefa mitombo ny sifilis, ny tononkira dia iray amin'ireo soritr'aretin'ny aretina voalohany. Io vinaingitra io dia voka-tsakafo kely. Izy io dia mivelatra mivantana eo amin'ny toeran'ny fampidirana ny treponem ao amin'ny vatana: amin'ny vehivavy - ao amin'ny labia na eo amin'ny vahin-jaza, ao amin'ny lehilahy - any amin'ny faritra misy ny pensilihazo. Ny fampiofanana dia mety mandratra, fa matetika dia tsy miteraka fahatsapana marary. Ao amin'ny fototry ny kansera dia misy fiantraikany mafy, ka nahazo izany anarana izany. Anatin'ireo fisehoana hafa momba ny sifilis dia azo fantarina:
Ny oedema indurative dia ny fananganana ny labia na ny voay. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia misy tian-kintana na rongony.
Amygladalite - faharesen'ny sifilis amin'ny volombatolon'ny fitateran'ny treponema. Miseho vokatry ny firaisana ara-nofo. Ny fanaintainana mandritra ny fitomboan'ny vatana, ny fahavoazana ambony, ny fahalemena, ny aretina mafy dia voamarika.
Arakaraka ny fisehon'ireo sifilis, inona no soritr'aretina, ny dokotera dia afaka mamantatra ny dingana amin'ny aretina:
Ny dingana voalohany (voalohany syphilis) - dia manomboka amin'ny aretina, dia ahitana ny vanim-potoana fanosehana rehefa tsy misy ny soritr'aretina. Ny halavan'ity dingana ity dia hatramin'ny 7 herinandro. Hita taratra amin'ny fananganana ny tongo-ketsa, voalaza etsy ambony, ny fihenan'ny lympha lehibe.
Ny dingana faharoa (syphilis faharoa) dia miavaka amin'ny fipoahana manerana ny vatana, izay tsy hita intsony sy tonga indray mandeha.
Ny dingana fahatelo - dia mampivelatra taona maromaro aorian'ny tsy fahampian'ny tsy fitsaboana mety, fitsaboana amin'ny dokotera. Vao haingana, nanjary nihamaro kokoa ny sifilis syphilis noho ny fihodinan'ny tany.
Inona no mampidi-doza ho an'ny sifilis?
Raha tsy tratra ela ny sifilis, dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamanao ny vokatr'ilay aretina. Ny lisitry ny fitsaboana azo atao dia lehibe, ary tsy voatery foana ny mamaritra izay mety ho vokatry ny fisian'ny treponema ao amin'ny vatan'olombelona. Anisan'ny vokatry ny aretina indrindra:
fampitomboana ny voangory;
ny faharatsian'ny fitaovana motera;
CNS lesions - neurosyphilis;
fanimbana ny atidoha;
Syphilis - Diagnostika
Fantatray ny momba ny sifilis, ny fomba itehoany azy, ilaina ny mamantatra ny fomba ahafahana mamantatra ilay aretina. Sarotra ny mamantatra ny fitsaboana tsy miankina - matetika ny aretina dia lasa amin'ny endrika tsy hita maso, dia voamarina amin'ny fanadinana fisedrana tsy nahy. Ny fototry ny aretina dia ny fomba fanaovana laboratoara. Ny fanatsarana ny teknika efa misy dia ahafahana mamantatra ny fisian'ny maso iray ao amin'ny vatana raha tsy misy ny fisehoan-javatra ivelany. Ny ra dia fitaovana ampiasaina amin'ny fianarana. Ny fanadihadiana natao ho an'ny syphilis dia azo tanterahina amin'ny iray amin'ireo fomba fiasa:
RW ( Testing Wasserman );
Rif (immunoassay enzyme);
fanehoan-kevitra momba ny fitrandrahana fandroana;
Syphilis - fitsaboana
Ny fitsaboana ny syphilis dia atao any amin'ny hopitaly. Ny fizotry ny fitsaboana dia voafidy manokana ary voafaritra amin'ny dingana arak'io aretina io, ny fisian'ny aretina miara-miasa, ny toe-pahasalaman'ny marary. Ny fototry ny fitsaboana dia fanafody antibaktera. Pale treponema dia mahatsapa amin'ny antibiotika amin'ny andian-tsarin'ny penisilinina. Na izany aza, dia mihamaro ireo fanafody ireo. Azo ampiasaina ny mpisolo toerana:
macrolides (Azithromycin, Erythromycin);
tetracycline (Doxycycline, tetracycline);
Ao amin'ny fitondran-tena feno syphilis, dia matetika ampiasaina ny andiana fanafody:
anti-inflammatory (naproxen, surgam);
Vitamins (B6, B12, ascorbic acid).
Azo atao ve ny manasitrana syphilis?
Ity fanontaniana ity dia matetika manontany azy ireo amin'ireo toerana ireo izay nipoiran'ny syphilis taorian'ny fitsaboana indray. Araka ny nomarihina etsy ambony dia tsy voavaha ny fiarovana amin'ny tsy fahampian-tsika amin'ny vatan'olombelona, ​​vokatr'izany, aorian'ny fiafaran'ny fitsaboana dia mety hiseho indray ny soritr'aretin'ny syphilis. Na izany aza, ny fitsaboana tonga ara-potoana, ny fanarahan-dàlana feno ny fitsaboana sy ny toro-marika avy amin'ny marary dia antoka ho an'ny fahasitranana feno. Ny statistika momba ny fomba fitsaboana syphilis dia aseho eo amin'ny latabatra etsy ambany.
Syphilis - zava-mahadomelina
Amin'ny toe-javatra tsirairay, ny fomba fitondran'ny sifilis - dia mamaritra ny mpihaino vavaka. Ny fitsaboana dia miankina tanteraka amin'ny endrika, dingana amin'ny aretina. Amin'ity tranga ity, ny vokatry ny fitsaboana dia miankina betsaka amin'ny fisafidianana tsara ny fitsaboana. Misy tetika maromaro ankapobeny izay mitarika dokotera amin'ny fitondrana syphilis. Ny fitsipika iraisam-pirenena manan-danja indrindra amin'ny fitsaboana an'io aretina io, izay manondro ny fanafody sy ny dosages, dia omena ao amin'ny tabilao etsy ambany.
Syphilis - fisorohana
Ny fisorohana ny aretina tsy azo tsapaina dia mikendry ny hanafoana ny fifindran'ny aretina.
Mba hisorohana ny sifilis ao an-trano dia mila:
Ampiasao ny fitaovana samihafa (alaharo tsara izy ireo aorian'ny sakafo).
Mampiasà vokatra fidiovana manokana.
Mialà eo amin'ny resaka firaisana, manoroka miaraka amin'ny marary.
Raha toa ka misy ny firaisana ara-nofo amin'ny marary, dia ilaina izany:
Arotsahy ny taovan'ny firaisana ara-nofo ivelan'ny vatana miaraka amin'ny vahaolana amin'ny Chlorhexidine.
Aorian'ny 2-3 herinandro dia mandinika ny fanaraha-maso ny syphilis.
PMS - soritr'aretina sy fitsipika fototra amin'ny fanafoanana ny aretina
Ahoana no ahafahanao manongotra mandrakizay?
Ny kibon'ny vehivavy - ahoana no fomba itondrana ny taova, inona ny habeny sy ny asany amin'ny vanim-potoana samihafa?
Ny sakafo amin'ny vato voa maina amin'ny voa
Ahoana ny famerenana ny tsy fahombiazan'ny hormona?
Ny fihenon'ny tratra
Cyclodinone - zava-mahadomelina hormona sa tsia?
Fanamaivanana ny fitsaboana
Amin'ny firy no mihodina ny tadin'ny rongony zaza vao teraka?
Fiakanjo fialantsiny ho an'ny vehivavy bevohoka
Ahoana no hanamboarana shankirika mangatsiaka?
Firy ny vola entina mankany Torkia?
Mannick - recipe malaza
Kofehy momba ny ridao
Elie Saab Spring-Summer 2014
Taom-piotazana - famantarana
Famerenana amin'ny laoniny aorian'ny fandidiana hanesorana ny hernia miasa
Lamba vita amin'ny tanam-paty
Sakafo miaraka amin'ny turkey sy sotro
Brazier avy amin'ny tavoahangy entona